Ividiyo: Gcina, Yinqoba, Khula ngeLungelo kwiNxibelelwano | Martech Zone
Ividiyo: Gcina, Yinqoba, Khula ngeLungelo kwi-Interactive
NgoLwesihlanu, Agasti 2, 2013 NgoLwesine, Julayi 10, 2014 Douglas Karr
Elinye lamaqhosha esiwachongileyo kwishishini lethu kukuba uhlobo oluthile lomthengi sisitshixo kwimpumelelo yomthengi nakweyethu. Eminye yayo inento yokwenza nezixhobo, ezinye zinamashishini abakuwo kwaye uninzi lwawo kukuqondwa kwexabiso kunye nokubuya kutyalo mali. Sineminyaka emi-5 kuphela ubudala kwaye isilingo kwiminyaka embalwa yokuqala yayikukuthatha nawuphi na umthengi onokutyikitya itsheki. Asisenzi loo nto kwakhona… silumke kakhulu ukuba ngubani na oqeshayo kuthi.
Kwinqanaba elikhulu, ndiyakholelwa ukuba oku kubalulekile kwimpumelelo yenkampani nganye. Iinkampani ezininzi kakhulu zityhala nje ukufumana nabani na kwisivumelwano, emva koko babethwa yimicimbi yenkxaso, ingeniso yabathengi, ukuhlawula amatyala kunye neengxabano zenkonzo, kunye nokungalungelelani okulindelweyo.
Ekunene kwi-Interactive ungumxhasi kwaye sikwangabahlobo abakhulu kwinkampani. Xa amashishini efuna usetyenziso lokuzenzekelayo, uninzi lwengqwalaselo lubekwa kwizikhokelo ezitsha, iifaneli kunye nokuguqulwa. Ukulinganisa iyasetyenziswa, inikezela ngokubaluleka kwezinye iifragraphics okanye isimilo esijolise kubhalisi… kodwa kukho umsantsa omkhulu kubukrelekrele babo.
Lo msantsa yeyokuba uninzi lweenkqubo zokuzenzekelayo zifumana abantu abanokuba bakulungele ukusayina ... kodwa musa ukuthelekisa indlela abaziphethe ngayo kunye neempawu zabathengi bakho. Kwaye abayikhathaleli indlela yokuziphatha kunye neempawu zabathengi bakho bangoku. Sonke siyazi ukuba kubiza imali eninzi ukugcina umthengi wangoku kunokuya kukhangela entsha.
Ukuthengisa akukho malunga nenani leendwendwe, isikhokelo okanye uguquko onalo. Intengiso enkulu imalunga nokuqonda ukuba ngoobani abathengi bakho, ukufumana okuninzi njengabo, ukubagcina bonwabile, kunye nokukhulisa ubudlelwane kunye nabo. Ekunene kwi-Interactive ithi ngokugqibeleleyo ... Phumelela, Gcina, Khula.
Khuphela kwi-eBook ye-Intanethi, Yintoni le ntengiso ye-Lifecycle ngoku!
tags: Ukufumana amanqaku ama-3desizisebenzelayoukugcinwa kwabathengiIntengiso yobomi bemisontoukugcinwaekunene kunxibelelwanoukufaka amanqaku
Agasti 2, 2013 kwi-10: 44 AM
Enkosi uDouglas, kuya kufuneka ndiyijonge le nto.